नेपालगन्जमा ठेगान नभएको बिद्युत ! - Arthapage
नेपालगन्जमा ठेगान नभएको बिद्युत !
प्रकाशित मितिः २४ श्रावण २०७८, आईतवार ०६:५३ September 7, 2021
नेपालगन्ज २५ साउन : देशभर लोडेसेडिङ्ग अन्त्य गरेर वाहीवाही कमाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालगन्जमा भने अघोषित लोडसेडिङ्ग शुरु गरेर नागरिकलाई मर्माहत बनाएको छ । नेपालगन्जमा गर्मी बढेसंगै सबैभन्दा बिद्युत आवश्यकता भएका बेला विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले एकहप्तायता दैनिक दर्जनौ पटक विद्युत काट्दै आएको छ ।
दिनभर मात्र होइन रातभर कयौं पटक विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्दा नागरिकहरु सुत्न र बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर बिडम्बना ! उनीहरुको दुखेसो सुनिदिने कोही भएको छैन । इनभटर जस्ता बैकल्पिक विद्युतीय उपकरण जोड्न नसक्ने नेपालगन्जका नागरिक विद्युत प्राधिकरणको मारमा परेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले लोडसेडिङ्ग भएको र त्यसको तालिका सार्वजनिक गरेको छैन । तर अवस्था लोडसेडिङ्गको भन्दा कम नभएको कोरियपुर–१२ निवासी करण पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘कोरियनपुरमा आज एक हप्ता भयो दिनभर र रातभर दर्जनौ पटक विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन्छ । सोमवार राती १२ बजेदेखि डेढ बजेसम्म बिद्युत गयो । त्यसपछि केही मिनेटका लागि आएको विद्युत फेरी आउने, जाने गरिरह्यो । रातभर सुत्न पाइएन ।’
कोरियनपुरमै बस्ने हरी शाहीका अनुसार, सबैभन्दा बढि बिद्युत कटौती हुने ठाउँमा रुपमा अहिले कोरियनपुर नै छ । ‘सरकारले स्कुल, कलेज जान दिएको छैन । अनलाइन कलास लिन बिद्युत हुँदैन । दिनभर पढ्न पाइदैन, रातभर सुत्न । यस्तो अमानविय हर्कत गर्दा प्राधिकरणलाई भन्ने कोही भएन ।’– शाहीले भने ।
कोरियनपुर मात्र होइन, नेपालगन्जको लगभग सबै ठाउँका नागरिकको गुनासो यस्तै छ । नेपालगन्ज–४ निवासी खम्बप्रसाद पुन भन्छन्,–‘नेपालगन्जमा अहिले चार पाँच वर्ष अघिको लोडसेडिङ्गको अवस्थामा पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो थिएन । प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
चर्को गर्मीमा विद्युत खपत धेरै भएकाले समस्या उत्पन्न भएको भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको अमुर्त र गैरजिम्मेवार जवाफ नेपालगन्जबासीका लागि अस्विकार्य भएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकलाई बिद्युत सेवा नियमितरुमा दिनुपर्ने दायित्वबाट प्राधिकरण बन्चित भएको श्रेठले जनाए । ‘नेपालगन्जमा गर्मी हुन्छ भन्ने थाहै छ, प्राधिकरणले लोड कम गर्न उपाय सुझाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो नगरी नागरिकलाई दुःख दिइरहेके छ । इन्तु,परन्तु होइन नेपालगन्जबासीलाई नियमित विद्युत चाहियो ।’
प्रकाशित मितिः २४ श्रावण २०७८, आईतवार ०६:५३ |
Prevवेस्टर्न मलले नेपालगन्जको व्यापारमा नयाँ आयाम दिन्छ-संजय थापा
Nextएकहप्ताका लागि यतिले ल्यायो ‘सस्तो’ अफर, नेपालगन्ज -काठमाण्डौको भाडादार २५ सय